ISKA ILAW KHILAAFKII POGBA: Jose Mourinho Oo Alexis Sanchez Bahdilaad Ugu Horsameeyay Ciyaartoyda Kooxdiisa Intii Aanu Gabi Ahaanba Ka Reebin Kulankii West Ham. - GOOL24.NET
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa u muuqda in uu cadow badan ka dhex samaysanayo kooxdiisa kadib markii uu sii balaadhiyay ciyaartoyda uu khilaafku kala dhexeeyo. Iyada oo la ogaa wixii dhex maray Mourinho iyo Pogba, ayuu markale macalika ree Portugal bahdilaad ku sameeyay Alexis Sanchez iyada oo waliba ciyaartoyda kooxda kowaad ay daawanayaan.
Alexis Sanchez ayaa ciyaartoyda kooxdiisa Manchester United ula safray London ka hor kulankii West Ham United laakiin waxaa gabi ahaanba laga dhex wayay shaxdii uu Mourinho kulankan ku soo galay iyo waliba ciyaartoydii kaydka fadhiday taas oo su’aalo badan keentay.
Alexis Sanchez ayaa si xun ugu soo dhibtoonayay hanaanka ciyaareed ee Jose Mourinho si la mid ah xidigo kale oo isla kooxdiisa ka tirsan laakiin wariyaha ree Chile ee Maks Cardenas ayaa shaaca ka qaaday in Mourinho uu xarunta tababarka kooxdiisa Man United uu shaqo gaar ah ugu diray intii uu lagu mashquul sanaa xaaladii Pogba.
Wariyaha ree Chile ee Maks Cardenas ayaa sidoo kale sheegay in Jose Mourinho uu canaan dhaha ku jaray Alexis Sanchez isla markaana uu ku hor bahdilay ciyaartoyda kooxdiisa ka hor intii aanu gabi ahaanba ka saarin liiska kooxdiisa ee kulankii West Ham.
Laakiin Sanchez ayaa daawanayay kooxdii laga reebay ee Man United oo guuldaro 3-1 ahi ka soo gaadhay West Ham United waxayna taasi hadda u muuqataa mid xaalad xun oo kale sii dhex galinaysa Jose Mourinho.
Wargayska Daily Mirror ayaa sheegay in isla todobaadkan shaqada laga caydhin karo Jose Mourinho halka warar kale oo soo baxayaa sheegayaan in Jose Mourinho laftiisu uu diyaar u yahay in shaqada laga caydhiyo taas oo lagu tilmaamay qaabka xun ee uu ciyaartoyda kooxdiisa ula dhaqmayo.
Jose Mourinho ayaa si ula kac ah erayo xumaan ah ugu tuuray Pual Pogba isaga oo waliba ogaa in kamarada saxaafadu ay taalay xarunta wuxuuna muujiyay in aanu dan ka lahayn xalinta khilaafka xun ee uu xidiga ree France kula jiro.
Balse in uu hadda markale bahdilaad ku sameeyay Alexis Sanchez waxay muujinaysaa in isaga laftiisu uu diyaar u yahay in laga caydhiyo shaqada Man United inkasta oo uu ogyahay in maamulka Red Devils ay qiimo badan ku kici doonto taasi.
Si kastabaha ha ahaatee, halyaygii hore ee Man United ee Rio Ferdinand ayaa maamulka kooxdiisii hore ee Ed Woodward ugu baaqay in uu hadda go’aan deg deg ah xaalada ka gaadho inta ayna ka sii xumaan.